खानै नपुग्ने ज्याला | Rastra News
खानै नपुग्ने ज्याला
श्रमिकको प्रश्न –‘‘बिमारी पर्दा कहाँबाट ल्याएर उपचार खर्च गर्नु ? छोराछोरी कसरी पढाउनु ?”
झापा, १४ फागुन (रासस)।चियाको चुस्कीबाट बिहानको कामकाज शुरु गर्ने नेपालीको बानी बसिसकेको छ । मगमगाउने त्यही चियाले पाहुनाको सत्कार पनि गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी चियाको व्यापार गरेर मुलुकले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । त्यही चियाको बोटमा पसिना सिञ्चित गर्दै आएका हजारौँ श्रमिकले भने कहिल्यै खान पुग्ने गरी ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
“तीन सय पचासी रुपैयाँले कसरी जहान छोराछोरी पाल्नु ?”, चिया श्रमिकको जीवन निकै कष्टकर रहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे –‘‘बिमारी पर्दा कहाँबाट ल्याएर उपचार खर्च गर्नु ? छोराछोरी कसरी पढाउनु ?”
नेपाल चिया विकास निगम, गिरीबन्धु टी इस्टेट, हिमालय गुडरिक, बुधकरण टी इस्टेट, मित्तल टी इस्टेट लगायत ठूला चिया बगानमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत छन् । ‘‘जहाँ धेरै श्रमिक छन्, जहाँ धेरै चिया उत्पादन हुन्छ, मजदूरलाई बढी दुःख पनि त्यहीँ छ,’’ विर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटकी श्रमिक सावित्रा बञ्जाराले भनिन्, “म एउटी महिला हुँ, हरेक दिन विहान ७ बजेदेखि चियाको पत्ति टिप्न बगान जान्छु, तर मैले जति ज्याला पाउँछु, त्यतिले खानै पुग्दैन ।” सरकारले दुई वर्ष अघि तोकेको ज्याला बढाउन मजदूरहरुले गत वर्ष आन्दोलनको तयारी गरेपछि ट्रेड युनियनहरुको पहलमा नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ दैनिक ज्याला रु ३० बढाउन सहमत भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले बताए । नेपाल चिया विकास निगमले पनि रु ३० बढाउन मञ्जुर गरेको छ । बढेको समेत जोड्दा चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला अब रु ४१५ पुगेको छ ।
रु ४१५ समेत मजदूरको जीवन धान्नका लागि पर्याप्त नहुने मजदूरहरुले बताए । निजी क्षेत्रसँगको समझदारीमा बढेको रु ३० ले अझसम्म सरकारी मान्यता पाउन सकेको छैन । अधिकांश चिया बगान र प्रतिष्ठानमा दुई वर्ष अघिकै ज्याला लागू भइरहेको छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटमा मजदूरहरुले पुरानो पारिश्रमिकको बक्यौता समेत पाउन सकेका छैनन् ।
चिया उद्योगीहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चिया क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने हाकाहाकी बताउँदै सरकारको योजनालाई असफल बनाइरहेका छन् । यसले चिया श्रमिकको पेन्सन सुविधाको आशामा तुषारापात भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले चिया श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेको जनाउँदै उहाँहरुको न्यूनतम् ज्याला बढाउन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन पहल गरिने बताए ।
मानव अधिकार एलायन्स झापाका अध्यक्ष रुद्र सिटौलाले चिया श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जीवन धान्ने पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा पाउनु पर्ने बताउनुभयो । श्रमिकहरुको मानवाधिकार हनन् हुने अवस्था आउन नदिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।